အဆင့် ၁) သင်ပိုမိုပျော်ရွှင်လို။ ပိုမိုအောင်မြင်လိုပါသလား။
အဆင့် ၂) လူတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မကူညီနိုင်ပါ
လှမ်း ၃) လှုံ့ဆော်ခံရသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ သင်လှုံ့ဆော်ခံရပါသလား။
အဆင့် ၄) မည်သူနှင့်လမ်းလျှောက်ရမည်ကိုရွေးချယ်ပါ & #8230;
အဆင့် ၅) သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - အခကြေးငွေ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ငွေပေးချေမှု
အဆင့် ၆) သဘောတူထားသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
အဆင့် ၇) သင်၏အစီအစဉ်ကိုလိုက်နာပါ
အဆင့် ၈) သင်၏တိုးတက်မှုကိုထိန်းသိမ်းပါ
အဆင့် ၉) Feedback ပို့ပေးပါ
အဆင့် ၁၀။ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောဘဝကိုခံစားပါ။
အွန်လိုင်းအကူအညီ၊ နည်းပြ၊ တိုင်ပင်ခြင်းနှင့်ကုထုံး
တစ်ခုတည်းအစည်းအဝေးများ US $95 / session တစ်ခု (တစ်နာရီခန့်)
နေ့ရက်များ US ၁TP2495 / တစ်ရက် (+ ခရီးသွားလာစရိတ်)
အထုပ်များ US $395 /5တစ်နာရီအစည်းအဝေးများ
လေ့ကျင့်ရေးနေ့များ ကျေးဇူးပြု၍ မေးပါ
သင်၏အောင်မြင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုသည်သင်၏ဘ ၀ ၌တစ်စုံတစ် ဦး ကိုစိတ်ဆိုးစေမလား၊ သို့မဟုတ်သင်၏ဘဝ၌တစ်ချိန်ကသူဖြစ်ခဲ့သည်။
လှုံ့ဆျောမှု willpower အကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။
သင်၏ Soulwork အဖွဲ့သုံးခုနှင့် #8230 နှင့်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အားလုံးသည်ထိုးထွင်းသိမြင်၊ စကားအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ကိုမှုတ်သွင်းခြင်း၊ ထိမိခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုတောင်းသောကာလများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်စေသည်။ လန်ဒန်
သင်ကမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သည်ဟုခံစားရလျှင် & #8211; မင်းဟာမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တဲ့လူတွေကိုလိုက်နေသလား
သင်ဖွံ့ဖြိုးလို၊ ရင့်ကျက်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမျိုးဖြစ်လိုပါသလား။
သို့မဟုတ်သင်၏ဆက်ဆံရေး၊ ၀ င်ငွေသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်အထိစောင့်ဆိုင်းပါသလား။
၎င်းသည်ဘဝပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂလိကနှင့်စီးပွားရေးဘဝအရည်အသွေးတိုးတက်ရန်ကြိုးစားနေသူမည်သူမဆိုအတွက် Martyn & #8217; s ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
စတီဖင် Werft, စီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံt
1. သင်နည်းပြသို့မဟုတ်ကုထုံးရှာပါသလား ဒီစားပွဲကိုစစ်ဆေးပါ။
2။ ဒါကမင်းအတွက်လား။ ဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေပါ
3။ နည်းပြတစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ပြီးရက်ချိန်းယူပါ
အဆင့် ၁) သင်လုပ်ပါ လိုချင်တယ် ပိုပြီးပျော်ရွှင်ဖို့နဲ့ပိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်လား။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတစ်ချိန်ကသူတို့နှင့်တ ဦး တည်းကိုင်တွယ်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည် & #8211; ပင်ရှည်လျား slimy လိမ်သူတွေကို။ ဖလော်ရီဒါ
များသောအားဖြင့်အပြောင်းအလဲ၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းများမှာသင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်လိုသည်နှင့်ထိုအရပ်မှမည်သို့သွားရမည်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြေလှမ်းတိုင်း၌သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
စနစ်တကျနည်းပြ စနစ်တကျအကြံပေးခြင်း စနစ်ကုထုံး
ငါတို့ အွန်လိုင်းအကူအညီ ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ခြင်း၊ ပconflictsိပက္ခများကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ခြေလှမ်းလှမ်းခြင်းစသည့်အောင်မြင်မှုအကြောင်းပါ။ မင်းရဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုပြည့်မီဖို့သင်လှုံ့ဆော်ခံရသလား။ ငါတို့ ဆက်ဆံရေးအကြံပေးခြင်း ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ ပိုကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးလိုချင်ပါသလား ငါတို့ ကုထုံး နက်ရှိုင်းသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူဘဝကိုနည်းပြများနှင့်ဆက်ဆံရေးအကြံပေးခြင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ စိတ်ခံစားမှုများသို့မဟုတ်အလေ့အထများကသင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုပျက်ပြားစေသလား။
ကြပါစို့ & #8217; scငါတို့စိတ်နှလုံးကို onnect ။
ငါတို့သုံးနိုင်တယ် Skype တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ဆုံပြီးအတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်မနိုင်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့။
မင်းကငါနဲ့အတူငါ့ရဲ့အိပ်မက်ဆိုးတွေထဲကိုလျှောက်သွားခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့အဲဒီထဲမှာမင်းကငါဟာအံ့ tre စရာကောင်းတဲ့ဘဏ္treာကိုရှာဖွေနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ် & #8211; ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Sussex
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတို့အားဒေါသ၊ ၀ မ်းနည်းမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အပြစ်ရှိသည်ဟုစီမံခြင်း၊ မလိုလားအပ်သောအလေ့အထများကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများစွာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ငါပိုက်ဆံထက်ပိုတယ် & #8217; s ကိုတန်ဖိုးရှိ။
ပိုက်ဆံပြaနာဖြစ်ရင်တခါတလေငါတို့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကမင်းကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ် & #8211;
၂၄ နှစ်ကျော်: သင်သည်လှုံ့ဆော်ခံရပြီးရင့်ကျက်သောပုံရှိသည်။ သင်နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အပျော်ဖြစ်သည်။
၁၅ နှစ်ကျော် ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများသည်သင့်အတွက်ကောင်းသင့်သည်။
၁၅ မှတ်အောက်မှာ - ခင်ဗျားကိုမကူညီမချင်းမကူညီနိုင်ဘူး
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အထူးပြုများအတွင်းအလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားကျောင်းများ၏သီအိုရီများ၊ အယူဝါဒများသို့မဟုတ်နည်းစနစ်များကိုသာကန့်သတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တကျစိတ်ပညာ၏လက်တွေ့ကျသောသမာဓိရှိမှုကိုစိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီသည်ဒpartနိကဗေဒနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဂ္ဂိရတ်ပညာရှင်များဖြစ်ကြသည်။ စုံထောက်
နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း shaman & #8230; အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုလက်တွေ့ကျတဲ့။ Martyn
အထောက်အထား, စိတ်ခံစားမှုများ၊ ယုံကြည်မှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီမှန်ကန်သောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် #8211; ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု၏ရင်းမြစ်နှင့်မှန်ကန်သည်၊ #8211; Soul အတွက်မှန်ကန်သည် ဘဝရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသူများသည်ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးတွင်ဘဝရည်မှန်းချက်များ၊ ချစ်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမျှဝေနိုင်သည်။
သင်၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်သင်၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်သင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုသင်ပုံမှန်အားဖြင့်သတိထားမိသည်ထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအဆင့်အထိလေ့လာပါ။ သင်၏အစောပိုင်းမိသားစုကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏စစ်မှန်သောမိမိကိုယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်ပျော်ရွှင်။ ဖန်တီးမှုရှိသောဘဝကိုရှင်သန်ရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
သင်၏ရင့်ကျက်မှု၊ သင်၏ဆက်ဆံရေး၊ သင့်ကျန်းမာရေး၊ ဆက်နေရန်အတွက်သင်၏သက်သာခွင့်များနှင့်သင်မည်မျှဖြေရှင်းလိုသည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ချက်တင်.
အချို့လူများက ပိုမို၍ ပိုမိုသောအလုပ်များကိုလုပ်ချင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်ကြပြီး #8230; သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်။
အထုပ်များ အမေရိကန် $395 /5အစည်းအဝေးများ
နေ့ရက်များ US $495 (တစ်ရက်လျှင် ၇ နာရီ)
မင်းတို့ကိုငါတို့ကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေချင်တယ်၊ ဒါကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ ကြိုတင်ပေးချေပါ။
မင်းကိုဖုန်းဆက်မယ်ဆိုရင် အမေရိကန် $10 / တစ်နာရီ ယူကေ၊ ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်တို့တွင် (အပို) ။
မင်းဆီကိုလာရင် ကျွန်ုပ်တို့၏နှုန်းထားပေါင်းကုန်ကျစရိတ် & #8211; အနည်းဆုံး 10 အစည်းအဝေးများ
ငါတို့အဘို့သင်ပေးလျှင် သင်မျှော်လင့်သည့်အရာနှင့်စကားပြောပါစို့ & #8217; s
ငွေပေးချေမှု အားဖြင့်ပေးဆောင် PayPal, Western Union သို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေလွှဲ
၂၄ နာရီအတွင်း session တစ်ခုဖျက်သိမ်းလျှင်သင်က ၅၀၁TP1 ကိုသာပေးရမည်။
အကယ်၍ သင့်အားအကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ session တစ်ခုကိုလွဲချော်လျှင် & #8230; သင်အပိုဆုအခမဲ့ session ကိုရ။
သင်မကျေနပ်လျှင် ၇ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။ နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ၏ကုန်ကျငွေကိုပြန်အမ်းပေးပါမည်။ *
နာမည်: မိတ်ဖက်အခြေအနေ မြို့ / အချိန်ဇုန်:
အသက် - မိုဘိုင်းဖုန်း*: ပြstartedနာများစတင်သည် -
မင်းမှာရှိလား Skype & PayPal အကောင့်များ?
အီးမေးလ်ပူးတွဲဖိုင်များ & #8211 ကိုကျွန်ုပ်တို့မဖွင့်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤအီးမေးလ်ကိုကူးယူပြီးကူးထည့်ပါ။
ငါမျှော်လင့်ထားသည့်စျေးနှုန်း၏အနည်းငယ်မျှဖြင့်ကျွန်ုပ်လိုချင်သောပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ & #8230; သင်၏အလုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ Edinburgh
စိတ်ခံစားမှုရင့်ကျက် Change immature emotional habits & behaviors
recognize and change my destructive relationship habits. သြစတြေးလျ၊
Make happiness မင်းရဲ့ goal.
Not even. Not only. I’m very glad that we met. လန်ဒန်